Arch Linux 2020.02.01, itsva ISO mufananidzo unosvika uine mashoma shanduko | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura, nhau nezve imwe yeLinux-based mashandiro esisitimu evashandisi vepamberi haisi kunakidza. Kanopfuura mwedzi wapfuura isu takashuma pa a 2020 yekutanga vhezheni iyo yakauya neshanduko yakakosha muiyo (inenge) kernel yekupedzisira. Mwedzi uno ivo vaparura Arch Linux 2020.02.1, iyo Kukadzi vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu, uye zvakanyanya isu tinofanirwa kupa nhau iri kopi yeiyo yakaburitswa mwedzi wapfuura.
Panguva ino ivo vakagadzirisa zvakare kernel, asi havana kuwana nguva yekuisa Linux 5.5 iyo yakasunungurwa rinopfuura vhiki rapfuura. Iyo kernel yekuvandudza timu haina kuraira kutorwa kwakawanda kweiyo yazvino vhezheni vhezheni kudzamara yekutanga yekugadzirisa inogadziridzwa yaburitswa, chimwe chinhu chakatosvika asi kwete munguva yekuti chiiswe muArch Linux 2020.02.1. Iyo kernel iyo yavakaisa mune ino ISO iri Linux 5.4.15.
Arch Linux 2020.02.01 inoshandisa Linux 5.4.15
Sezvo vazhinji venyu vatoziva kare, Arch Linux inoshandisa iyo yekuvandudza modhi inozivikanwa se Kutenderera Kuburitswa, zvinoreva kuti mushure mekutanga kuisirwa, isu tinogashira zvigadziriso zvehupenyu kubva kune imwecheteyo inoshanda sisitimu. Zvinoburitswa naAaron Griffin nechikwata chake mwedzi wega wega zviri zvechizvino-zvino mifananidzo yeIO neshanduko dzese dzavakaita mumazuva makumi matatu apfuura, ino nguva inosanganisira 30th kudzokororwa kweLinux 5.4. Mamwe mapakeji, senge dzazvino vhezheni dzewebhusaiti uye vanyori vayo vanyori, vakagadziridzwa zvakare.
Vashandisi varipo vanogona kutarisa kumirira kuvandudzwa uye nekuvaisa nekuvhura terminal uye typing iyo raira «sudo pacman -Syu», pasina makotesheni. Ivo avo vanoda kuita yakachena yekuisa vanofanirwa kurodha pasi Arch Linux 2020.02.01 mufananidzo kubva Iyi link. Iyo inotevera vhezheni ichave yatove Arch Linux 2020.03.01 iyo mukugona kwese ichasvika neLinux 5.5. Kutanga kwayo kwakarongerwa Kurume XNUMX.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Arch Linux 2020.02.01, itsva ISO mufananidzo weiyo inoshanda sisitimu iyo inosvika iine mashoma shanduko